बाबुरामले भने : अब सडक तताउने पालो हाम्रो, हामी कांग्रेसलाइ साथ दिन्छौं ! – " कञ्चनजंगा News "
बाबुरामले भने : अब सडक तताउने पालो हाम्रो, हामी कांग्रेसलाइ साथ दिन्छौं !
No Comments on बाबुरामले भने : अब सडक तताउने पालो हाम्रो, हामी कांग्रेसलाइ साथ दिन्छौं !
काठमाडौं : समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले अब सडक आन्दोलन थाल्ने बताएका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. भट्टराईले संविधान संशोधन र नागरिकतलाई लिएर सडक आन्दोलन गर्ने बताए ।
‘हामीले लामो समयदेखि संविधान र शासकीय स्वरुपमा असहमति राख्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्न मानेन। अब हामी प्रतिपक्षमा बसेर आन्दोलन गर्छौँ। अब सडक आन्दोलन गर्ने पालो आयो, हामी सडकमा जान्छौँ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्न नमानेपछि समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका यादव र मोहम्मद इस्तियाक राईले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए। समाजवादीले बुधबार ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
भट्टराईले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा विचार र मुद्दाका आधारमा कांग्रेससँग सहकार्य हुने बताएका हुन्। ‘अब पनि सरकारमा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर जानु त्यो जति बेकुफ अरु हुँदैन।’
← कालापानी क्षेत्र जोड्ने बाटो सर्भे गरिँदै → घर भाडा भन्दा बैंकको किस्ता सस्तो : मासिक ९ हजार किस्तामा एभरेष्ट बैंकले घर किन्न ऋण दिने,कर्जा पाउनु भएन ? अर्थमन्त्रीलाई इमेल गर्नुहोस